खै त सडकमा साझा, कि तपाईपनि कानूनी राज्यको विरोधमा हो ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार खै त सडकमा साझा, कि तपाईपनि कानूनी राज्यको विरोधमा हो ?
खै त सडकमा साझा, कि तपाईपनि कानूनी राज्यको विरोधमा हो ?
काठमाडौं, १३ जेठ । सवारी चालकले नियम उलघंन गरे बापत ट्राफिक प्रहरीले कारबाही शुल्क बढाएको भन्दै यातायात व्यवसायीले बिहीबार बिहानैदेखि उपत्यकामा चक्काजाम गरेका छन् । यो क्रममा पाँच ओटा सवारी साधानमा तोडफोड गरिएको छ ।
ट्राफिकले जरिवाना शुल्क २५ रुपैयाँ देखि दुईसय रुपैयाँ सम्मलाई जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पाँच सय देखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याएको भन्दै विरोध स्वरुप चक्काजाम गरेका हुन् । यातायात व्यवसायीले नै गरेको बन्दमा नीजि सवारी बाहेक भाडाका सवारी चल्ने कुरै भएन । यो समयमा उपत्यकाबासीले झलझली साझा यातायातलाई सम्झी रहेका छन् । त्यसको कारण हो साझा यातायात कोही सकैको आन्दोलन, डर, धम्की देखि डराउँदैन । उ सदैव जनताको सेवामा हाजिर छ ।
यस अघि पनि माओवादीले गरेको बन्दको समयमा साझा सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रहरी स्कटिङको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर आज व्यवसायीले गरेको भएर नै त होलानी सडकमा छैन साझा । यसको अर्थ के त कतै कनकमणि दिक्षित पनि राज्यले बनाएको नियम कानूनलाई वाईपास गर्नु पर्छ, गल्ती गरेपछि जरिवाना तिर्न पर्र्दैन भन्ने अभियानमा नै त हैनन ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।
यदि कनकमणि दिक्षितले कानून मान्ने हो भने खै त आज सडकमा साझा यातायात । अरु व्यवसायीले विरोध गरिरहँदा सडकमा साझा हुने हो भने कमसेकम आम सर्वसाधारणले न सास्ती भोग्नु पर्ने थिएन । यसर्थ आम सर्वसाधारणले आंकलन गरेजस्तै साझा पनि राज्यको कानूनको बर्खीलाफमा नै हो त ?
मारुती भ्यानको ठक्करबाट मृत्यु